Fisolokiana, kolikoly, fanararaotana andraikitra: kaomisera kaomandin’ny Fip nidoboka am-ponja | NewsMada
Par Taratra sur 11/07/2020
Niakatra teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana eo anivon’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), ny alarobia teo, ny raharaha mahavoarohirohy ny kaomisera, kaomandin’ny Fip Antsiranana. Naiditra am-ponja vonjimaika (MD) etsy Antanimora ity manamboninahitra ao amin’ny polisim-pirenena ity, taorian’izany.
Raharaha fisolokiana, fanaovana kolikoly, fanararaotam-pahefana. Ireo ny fantatra fa nahavoarohirohy ity manamboninahitra ambony ao amin’ny polisim-pirenena ity. Izany hoe, heloka voafaritra ao anatin’ny fehezan-dalàna fa­maizana (code pénale), araka ny fanazavan’ny loharanom-baovao, avy ao amin’ny polisim-pirenena. Nitana andraikitra ambony satria kaomandin’ny Hery vonjy taitra (Fip) any Antsiranana ity kaomisera ity. Ny herinandro lasa teo izy no nosamborina tany an-toerana, taorian’ireo fitarainana samihafa voaray mom­ba azy, nivantana mihitsy eny amin’ny fiadidiana ny Re­po­blika. Nentina manokana, niakatra nihazo ny an’Anta­na­narivo, tamin’ny alalan’ny helikoptera mihitsy, ary ni­vantana avy hatrany niatrika ny fakana am-bavany azy, teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana, eo anivon’ ny Tendrom-pitsarana misa­hana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), etsy 67 ha. Avy eo, naiditra am-ponja vonjimaika (MD) etsy amin’ny fon­jan’Antanimora, afakomaly.
Santionan’ny fisolokiana sy ny kolikoly nataony, ohatra, ny filazany fa hoe “olona akaiky ny fanjakana izy ary afaka mampiditra olona ho mpiasam-panjakana, raha mandoa vola aminy”… Fiso­lo­kiana nataony tamin’ny alalan’ny fanararaotana an­draikitra, amin’ny maha ma­namboninahitra ambony azy.
Hentitra ny polisim-pirenena
Tsiahivina ny lahateny nataon’ny minisitry ny Fila­minam-bahoaka, ny kaomisera Randrianarison Fanome­zantsoa Rodellys, fony izy nandray ny andraikitra amin’ ny maha minisitra azy. «Tsy misy ary tsy ekena ny fifampiarovana na ny kiantrano­antrano eo anivon’ny polisim-pirenena satria manimba ny andraikitry ny polisim-pirenena eo imasom-bahoaka izany», hoy izy tamin’izany. Nohamafisiny koa tamin’ izay fa “fa tsy anavahana andraikitra, tsy hijerena lah­aram-boninahitra na grady fa rehefa vandana dia kary ka tsy maintsy mizaka ny sazy vokatry ny heloka nataony”.
Ao anatin’ny firosoana amin’ny fanadiovana anatiny tokoa amin’izao fotoana izao ny polisim-pirenena ka tanjona amin’izany, araka ny voalaza, ny fanamafisana ny fitokisan’ny vahoaka amin’izy ireo. Manentana ny rehetra hatrany, araka izany, ry zareo eo anivon’ny polisim-pirenena hahasahy hitory sy hamaky bantsilana ny fandikan-dalàna amin’ny endriny rehetra, amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina, laharana 034 15 367 20. Azo atao koa ny manatona avy hatrany eny amin’ny sampandraharaha mpanara-maso ny asan’ny polisim-pirenena, etsy Anosy.